ထိုင်ဝမ်သည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်၍ ကုလသမဂ္ဂထံဝင်ရောက်ရန် အရည်အချင်းမပြည့်မီဟု နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ပြောကြား - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်သော ထိုင်ဝမ်သည် ကုလသမဂ္ဂထံ ဝင်ရောက်ရန် အရည်အချင်းပြည့်မီမှုမရှိကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးက အောက်တိုဘာ ၁၂ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ထိုင်ဝမ်ရှိ နိုင်ငံရေးသမားအချို့သည် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံဆုံးဖြတ်ချက် ၂၇၅၈ ကို မကြာသေးမီက ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ပုံဖျက်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြောင်း နှင့် ယင်းဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအသုံးချ၍ ထိုင်ဝမ်အား ကုလသမဂ္ဂထံဝင်ရောက်ရန် ပိတ်ပင်ထားခြင်းမှာ ကြောင်းကျိုးဆီလျော်မှုမရှိဟု၍ လွဲမှားစွာပြောဆိုခဲ့ကြောင်း သတင်းတွင်ဖော်ပြထားသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ ထိုင်ဝမ်ဒေသတွင် အလှဓာတ်ပုံရိုက်ကူးနေသော မိန်းကလေးငယ်အချို့အားတွေ့ရစဥ်(ဆင်ဟွာ)
ယင်းနှင့်ပတ်သက်၍ နေ့စဉ်ပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် သတင်းထောက်၏ မေးမြန်းချက်အပေါ် တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ကျောက်လိကျန်းက ကုလသမဂ္ဂသည် အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံများ၏ အစိုးရအချင်းချင်းကြား ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သည့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း နှင့် ၁၉၇၁ ခုနှစ်က ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ၌ ဆုံးဖြတ်ချက် ၁၇၅၈ ကို ပြဌာန်းခဲ့ကြောင်း နှင့် ယင်းမှာ နိုင်ငံရေး ၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများတွင် ကုလသမဂ္ဂ၌ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကိုယ်စားပြုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကိစ္စရပ်အားလုံးအတွက် ဖြစ်ကြောင်း တုံ့ပြန်ပြောကြားခဲ့သည်။
“ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ထိုင်ဝမ်အနေနဲ့ ဘယ်သောအခါမျှ ကုလသဂ္ဂထံ ဝင်ရောက်ဖို့ အရည်အချင်းပြည့်မီမှုမှာ မဟုတ်ပါဘူး” ဟု ကျောက်က ဆိုသည်။ ထို့ပြင် ကုလသမဂ္ဂ နှင့် ယင်း၏အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် တရုတ်တစ်နိုင်ငံတည်းရှိသည်ကို မကြာသေးခင်နှစ်များအတွင်းက အပြည့်အဝဖော်ပြကာ လက်တွေ့ကျင့်သုံးခဲ့ကြောင်း ၊ ထိုင်ဝမ်သည်တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပိုင်နက်နယ်မြေမှ လုံးဝ ခွဲထုတ်၍ မရသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း နှင့် ၎င်းတို့အနေဖြင့် ထိုင်ဝမ်အပေါ် တရုတ်နိုင်ငံ၏ အချုပ်အခြာအာဏာစီရင်ပိုင်ခွင့်ကို အပြည့်အဝလေးစားလိုက်နာခဲ့ကြောင်း ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
ကျောက်က “ ထိုင်ဝမ်လွတ်လပ်ရေး” ကြိုးပမ်းမှုပုံစံအားလုံးသည် အဆုံးတွင် ကျဆုံးသွားရမည်သာဖြစ်ကြောင်း နှင့် ယင်းလှုပ်ရှားမှုများသည် ထိုင်ဝမ်ရှိ လူပုဂ္ဂိုလ်အချို့၏ ဗြောင်ကျကျမိုက်မဲသော စိန်ခေါ်မှု နှင့် တရုတ်တစ်နိုင်ငံတည်းမူဝါဒကို ဆိုးဆိုးရွားရွားထိပါးမှုဖြစ်ကြောင်း နှင့် ကုလသမဂ္ဂဆုံးဖြတ်ချက် ၂၇၅၈ ကို မထီမဲ့မြင် ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် ချိုးဖောက်မှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ဆိုသည်။
“ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ဘယ်သူမှ မထောက်ခံတဲ့ (ထိုင်ဝမ်လွတ်လပ်ရေး) ကဲ့သို့ ပြောဆိုရေးသားချက်မျိုးကို ကျွန်တော်တို့ ခိုင်ခိုင်မာမာကန့်ကွက်ပါတယ်” ဟု ၎င်းဆိုသည်။
“ တရုတ်နိုင်ငံ အစိုးနဲ့ပြည်သူတွေဟာ နိုင်ငံတော်အချုပ်အခြာအာဏာနဲ့ပိုင်နက်နယ်မြေထိန်းသိမ်းတာ ၊ ခွဲထွက်ရေးကို ဆန့်ကျင်တာ နဲ့ ကုလသမဂ္ဂနဲ့သူ့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်တွေ နားလည်မှုထောက်ခံမှုနဲ့အတူ ပြန်လည်ပေါင်းစပ်ရေးကိုအောင်မြင်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်မယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်ပါတယ်” ဟု ကျောက်က ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
“ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရပ်တည်ချက်ဖြစ်တဲ့ တရုတ်တစ်နိုင်ငံတည်းမူဝါဒဟာ မယိမ်းမယိုင်အမြဲ တည်ရှိနေပါတယ် ၊ (တရုတ်တစ်နိုင်ငံ ၊ ထိုင်ဝမ်တစ်နိုင်ငံ) ဆိုတဲ့ တရုတ်နှစ်နိုင်ငံလိုဟာမျိုး နဲ့ ထိုင်ဝမ်လွတ်လပ်ရေးလိုဟာမျိုးကို လုံးဝလက်မခံပါဘူးဆိုတာ မပြောင်းမလဲတည်ရှိနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နိုင်ငံတော်အချုပ်အခြာအာဏာနဲ့ ပိုင်နက်နယ်မြေစိုးမိုးရေးကို မမှိတ်မသုန် ခိုင်ခိုင်မာမာဆုတ်ကိုင် ဆောင်ရွက်သွားမှာပါ” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။(Xinhua)
BEIJING, Oct. 12 (Xinhua) — Taiwan, asaprovince of China, is not qualified whatsoever to join the United Nations,aForeign Ministry spokesperson said here on Tuesday.
In response, spokesperson Zhao Lijian toldadaily news briefing that the United Nations is an intergovernmental international organization composed of sovereign states, and Resolution 2758 adopted by the General Assembly in 1971 has solved once and for all the issue of China’s representation in the UN in political, legal and procedural terms.
“Asaprovince of China, Taiwan is not qualified to join the UN at all,” Zhao said, adding that practice over the years fully shows that the UN and the vast number of its member states recognize that there is only one China in the world and Taiwan is an inalienable part of China’s territory, and they fully respect China’s exercise of sovereignty over Taiwan.
Zhao said “Taiwan independence” in all forms are doomed to fail, and the moves of hyping up this issue by certain individual in Taiwan constituteaflagrant challenge and serious provocation of the one-China principle, andablatant violation of the UNGA Resolution 2758.
“We firmly reject such typical ‘Taiwan independence’ rhetoric which will garner no support in the world,” he said.
“We believe that the just cause of the Chinese government and Chinese people to uphold national sovereignty and territorial integrity, oppose secession and achieve reunification will continue to win understanding and support of the UN and its member states,” Zhao added.
“Our position of adhering to the one-China principle will remain unchanged; our attitude of rejecting ‘two Chinas,’ ‘one China, one Taiwan’ and ‘Taiwan independence’ is not to be challenged, and our resolve of upholding national sovereignty and territorial integrity is unswerving,” he said. Enditem